Ciidamada Soomaliland oo laga saaray magaalada Buuhoodle oo ay gelinkii hore ee maanta soo galeen. – Radio Daljir
Janaayo 15, 2012 12:00 b 0
Buuhoodle, Jan 15 – Ciidamada maamulka Somaliland oo saaka galay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa lagu soo waramayaa in laga saaray magaalada Buuhoodle.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Cayn Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo ku sugan magaalada Buuhoodle ayaa Radio Daljir u xaqiijiyay kadib dagaal muddo kooban ka dhacay gudaha magaalada in ay u suurto gashay in ciidamada deegaanku mar kale dib u qabsadaan magaalada.
Dagaalka ayaa xiligaan waxaa uu kasoconyaa deegaanka Quraca Buuhoodle oo qiyaastii 1Km u jirta magaalada Buuhoodle.
Dagaalka ayaa wali laga dareemayaa magaalada,waxaana uu sheegay gudoomiye kuxigeenkii hore ee gobolka Cayn in ciidamada Somaliland laga gubay gaadiid dagaal,khasaaro dhimasho iyo dhaawacna la gaarsiiyay ciidamada Somaliland oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo soo duulay.
Maamulka Somaliland ayaan wali ka hadlin dagaalka saaka kadhacay magaalada Buuhoodle,inkastoo dagaalku uu kusoo beegmay maalin kahor markii madaxwaynaha Somaliland uu ku hanjbay inuusan ogolaan doonin maamulka cusub ee loo samayn doono gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn.
Ciidamada Somaliland oo qabsaday Buuhoodle.
Buhodle,Jan 15 -Ciidamo katirsan maamulka Somaliland ayaa saaka gudaha u galay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn,kadib dagaal xoogan oo dhexmaray shacabka deegaanka iyo ciidamada Somaliland.
Wararka Radio Daljir uu ka helayo magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ay sheegayaan la wareegitaanka ciidamada Somaliland ee degmada Buuhoodle inay ka dambeysay ka gadaal dagaal saacado badan socday oo ciidamo deegaanka Buuhoodle iyo kuwa Somaliland ku dhexmaray deegaanka Sool Joogto oo qiyaastii 30 km dhanka bari ka xigta magaalad Buuhoodle.
Lama oga inta uu la?oga khasaaraha dhabta ah ee ciidamada Somaliland iyo ciidamada deegaanka Buuhoodle kasoo gaaray dagaalkan,waxaana xaaladda magaaladu ay tahay mid aad u kacsan.
Madaxwaynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maalintii shalay kasoo horjeestay go’aankii kasoo baxay shirka Khaatumo2 ee kasocda degmada Taleex oo ay ka mid ahayd go’aamadii ergada shirka ka qaybgalay ay ku heshiiyeen gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn in loo sameeyo maamul goboleed ka madaxbanaan Puntland iyo Somaliland.